Mpampianatra - Cloud Library
I John Bevere dia mpanoratra ireto boky be mpividy indrindra ireto: Extraordinary (Olona miavaka), The Bait of Satan (Ny Fandrik’I Satana) , Tahotra an’i Jehovah, Under Cover (Eo ambany Fahefana), ary Sarihin’ny Mandrakizay. Ny fahasahiana sy ny fiontanam-po be no tena manamarika azy. Efa voadika amin’ny fiteny mihoatra ny 100 ny bokiny, ary mandeha maneran-tany ny fandaharany an-televiziona antsoina hoe “The Messenger”. I John dia mpitory fanta-daza amin’ny konferansa sy fiangonana samihafa, ary fampianarana manova fiainana no atolotry ny asa fanompoany ho an’ireo izay te-hahatakatra sy hampihatra ny fitsipik’Andriamanitra. Ankafizin’i John Bevere ny mipetraka any Colorado Springs miaraka amin’i Lisa vadiny, izay mpanoratra boky be mpividy indrindra ihany koa, sady mpitory. Manan-janaka lahy efatra, vinatovavy ary zafikely izy mivady, izay miara-monina aminy.
See Available Downloads Mailaka John Bevere
Ireto teny ireto no azo anoritana an’i Lisa: be fiontanam-po, maranitra, azo itokisana, mitomban-dahy, mampihomehy. Izy moa dia mpitory maneran-tany, mpanoratra boky be mpividy indrindra, mpiara-manolotra ny fandaharana an-televiziona “The Messenger” izay miparitaka any amin’ny firenena mihoatra ny 200. Izy dia olona mangarahara ary amin’izany no izarany ny Tenin’Andriamanitra izay mifamehy amin’ny traikefam-piainany manokana ho amin’ny tanjona fampaherezana, fanafahana ary fanovana fiainan’olona. I Lisa dia miady ho an’ny fahamarinana ka manosika ny hafa mba ho vahaolana amin’ny olana saro-bahana efa antomotra na mbola lavitra. Tiany mihitsy ny manokana fotoana iarahany amin’ireo mamin’ny fony, ny vadiny John Bevere, ny zanany efa-dahy, vinato-vaviny tsara tarehy ary ny zafikeliny mahafatifaty.
See Available Downloads Mailaka Lisa Bevere